कृषि कर्ममा रमाउँदै माओवादी नेता सुवेदी ! - krishipost.com
कृषि कर्ममा रमाउँदै माओवादी नेता सुवेदी !
माओवादीका नेता बाबुराम सुवेदीले पशुपालन गर्न लागेको झण्डै तीन वर्ष पुग्यो । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका ८ मुलपानीका सुवेदी पछिल्लो समय मोहन वैद्य निकट माओवादीको केन्द्रीय नेता छन् ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको लामो समयसम्म पनि राजनीतिमा कुनै उपलब्धि नदेखेपछि उनी कृषि कर्म रोजे । तीन वर्षअघि भारतको गुजरात पुगेर उनले नौ वटा भैंसी ल्याएका थिए । झण्डै २० लाखको प्रारम्भिक लगानीमा भैंसीपालन ब्यवसाय गरेका उनको अहिलेसम्म झण्डै एक करोड लगानी पुगिसकेको छ ।
साना ठूला गरी सुवेदीको गोठमा अहिले ३० वटा भैंसी छन् भने दैनिक ८० देखि १०० लिटर दूध उत्पादन भइरहेको उनी बताउँछन् । सुवेदीलाई आफ्ना परिवारका सदस्यहरुले पनि साथ दिइरहेका छन् । दुई भाई जुम्ल्याहा छोराहरुले दूध दुहुनेदेखि बजारमा लगेर बेच्ने समेत काम गर्छन् ।
तनहुँको दुलेगौंडा बजारदेखि झण्डै तीन किलोमिटर पश्चिम सेतीनदीको किनारमा सुवेदीको ढोरफिर्दी कृषि फर्म प्रालि छ । पोखराबाट ३५ किलोमिटर टाढा पर्ने मुलपानीबाट दैनिक पोखरा लगेर सुवेदीले दूध बिक्री गर्छन् ।
बिहान ५ नबज्दै उनको दूध पोखरामा लगेर पनि बिक्री भइसकेको हुन्छ भने बेलुका ४ बजे नै पोखरामा दूध पुर्याउँछन् । नजिकैको बजार दुलेगौंडामा भन्दा पोखरामा पुर्याएपछि दूधको मूल्य पनि राम्रो पर्ने भएकाले पनि उनी पोखरा लगेर दूध बेच्ने गरेका हुन् ।
तीन वर्षदेखि भैंसीपालन ब्यवसाय थालेका उनीले गत चैतदेखि माछापालन पनि शुरु गरेका छन् । मुलपानीको पानीले भैंसीगोठ र घाँसबारीदेखि माछापोखरीलाई पनि पनि पुगेको छ ।
पशुपालन ब्यवसायबाट सोँचेजस्तो आम्दानी नभएपछि उनले माछापोखरी खनेका हुन् । उनको अहिले ५ वटा माछापोखरी छ । व्यवस्थित गरेर तयार पारिएको पोखरीमा पालेको माछाले उत्पादन दिन थालेपछि उनी माछाबाट भने निकै सन्तुष्ट देखिन्छन् ।
झण्डै दुई विगाहा क्षेत्रमा घाँस उत्पादन गरेका उनले अरु एक विगाहा क्षेत्रफलको जग्गामा बहुवर्षे घाँस सुपर नेपियर लगाउने योजना बनाएका छन् ।
पशुपालनसँगै मत्स्यपालन ब्यवसाय शुरु गरेका उनले ब्यवसायिक तरकारी खेति पनि गर्ने योजना बनाएका छन् । लामो समय राजनीतिक पेशामा लागेका उनले कृषि कर्मबाट नै भविष्य खोज्न थालेका छन् ।
मलुकको समृद्धिको कुरा गर्ने अन्य राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले कृषि क्षेत्रलाई नै समृद्धिको आधार मान्ने गरेका छन् । तर राज्यले कृषि क्षेत्रमा भने केही पनि गर्न नसकेको उनको गुनासो छ ।
पछिल्लोसमय सुवेदीजस्तै लामोसमय युद्ध लडेका माओवादी नेता कार्यकर्ताहरु कृषि कर्ममा रमाउन थालेका छन् । पूर्वमन्त्रीसमेत भइसकेका माओवादीका नेता लोकेन्द्र बिष्टमगरले पनि दाङ्मा ड्रागनफलको खेति गरेर चर्चाको शिखरमा छन् ।